Man City oo diiradu u saaran tahay Daniele De Rossi iyo Sergio Busquets (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Man City oo diiradu u saaran tahay Daniele De Rossi iyo Sergio...
Man City oo diiradu u saaran tahay Daniele De Rossi iyo Sergio Busquets (Warbixin)
Tababaraha kooxda Manchester City Roberto Mancini ayaa dalabkiisii ugu dambeeyey 30 milyan oo ginni ugu u diri doona bisha Janaayo marka uu suuqu furmo xidiga qadka dhexe ee kooxda AS Rome Daniele De Rossi, sida ay qortay Majalada The Sun.
Macalinka City ayaa mar kale albaabka u garaaci doona Giallorosi, wuxuuna ka doonayaa 29 jirkaan dahabiga ah ee ka ciyaara qadka dhexe.
Laakiin City ayaa ku dhibaatoon doonta helida xidigaan, kaasoo lasoo sheegayo inuu khilaad kala dhexeeyo tababarihiisa Zdenek Zeman.
Dhanka kale Sky Blue ayaa shabaq kale u daad san yahay oo ay dooneyso inay ku hesho 24 jirka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona Sergio Busquets, waxayna City dooneysaa inay ka dhigto saxiixooda xiga ee xagaaga, sida uu werinaayo wargeyska Daily Mirror. Mancini ayaa doonaya inuu xidigaan ugu dambeyn kusoo biiriyo Etihad Stadium kasoo muddo dheer lala xiriirinaayey.
Chelsea iyo Manchester United ayaa xiiseynaayey Busquets, laakiin waa laha soo diiday dalabyo ay u direen.